32 Ndị ikom atọ a wee kwụsị ịsa Job okwu, n’ihi na ọ bụ onye ezi omume n’anya onwe ya.+ 2 Iwe Elaịhu nwa Barakel onye si n’agbụrụ Bọz,+ n’ezinụlọ Ram, wee dị ọkụ. Ọ bụ Job ka o wesoro iwe dị ọkụ n’ihi na ọ kpọrọ mkpụrụ obi nke ya onye ezi omume kama ịkpọ Chineke onye ezi omume.+ 3 O wesokwara ndị enyi ya atọ iwe dị ọkụ n’ihi na ọ dịghị ihe ha maara ha ga-aza, kama ha kpọrọ Chineke onye ajọ omume.+ 4 Ma Elaịhu nwere ihe ọ chọrọ ikwu, ma o cheere ka Job kwuchaa, n’ihi na ha tọrọ ya.+ 5 Elaịhu wee hụ na ọ dịghị ihe ọzọ ndị ikom atọ ahụ nwere ikwu,+ iwe ya wee dịkwuo ọkụ. 6 Elaịhu nwa Barakel onye si n’agbụrụ Bọz wee zaa, sị: “Abụ m nwata Ma unu bụ ndị okenye.+ Ọ bụ ya mere m ji chere, egwu tụkwara m Ịgwa unu ihe m maara. 7 M sịrị, ‘Ka ọtụtụ ụbọchị kwuo okwu, Ọ bụkwa ọtụtụ afọ ndụ kwesịrị ime ka a mara ihe bụ́ amamihe.’+ 8 N’ezie, ọ bụ mmụọ nke dị n’ime ụmụ mmadụ efu, Ya na ume nke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile, na-eme ka ha nwee nghọta.+ 9 Ọ bụghị ndị gbara naanị ọtụtụ afọ bụ ndị maara ihe,+ Ọ bụghịkwa ndị mere naanị agadi na-aghọta ikpe ziri ezi.+ 10 Ya mere, m sịrị, ‘Gee m ntị. Mụ onwe m ga-ekwupụta ihe m maara.’ 11 Lee! Echerewo m ka unu kwuchaa, Anọwo m na-anụ echiche unu,+ Ruo mgbe unu na-achọzi ihe unu ga-ekwu achọ. 12 M nọkwa na-ege unu ntị, Ma, lee, ọ dịghị onye na-abara Job mba, Ọ dịghị onye ọ bụla n’ime unu na-asa ya okwu, 13 Ka unu wee ghara ịsị, ‘Anyị achọtawo amamihe;+ Ọ bụ Chineke na-asa ya okwu,* ọ bụghị mmadụ.’ 14 Ebe ọ na-abụghị m ka ọ na-agwa, Agaghị m eji ihe unu kwuru saa ya okwu. 15 Ụjọ ejidela ha, ọ dịghịkwa ihe ọzọ ha na-asa ya; Okwu agwụla ha n’ọnụ. 16 Echerewokwa m, n’ihi na ọ dịghịzi ihe ha na-ekwu; N’ihi na ha gbachiri nkịtị, ọ dịghịkwa ihe ha na-asa ya. 17 Mụ onwe m ga-asa ya okwu; Mụ onwe m ga-ekwupụta ihe m maara. 18 N’ihi na okwu juru m ọnụ; Mmụọ nke dị n’ime afọ m arụgidewo+ m. 19 Lee! Afọ m dị ka mmanya na-enweghị ebe o si ekupụ; Ọ chọrọ ịgbawa dị ka karama akpụkpọ ọhụrụ.+ 20 Ka m kwuo okwu, ka ahụ́ wee dajụọ m. M ga-emeghe ọnụ m gwa unu okwu.+ 21 Biko, agaghị m ele mmadụ ọ bụla anya n’ihu;+ Agaghịkwa m etu mmadụ aha;+ 22 N’ihi na amaghị m otú m ga-esi etu mmadụ aha; Onye kere+ m ga-ewepụ m n’egbughị oge.
Otú e si dee ya n’asụsụ Hibru bụ ‘na-achụpụ ya.’